Puntland oo gacanta ku dhigtey Xubno katirsan Daacish. – Geelle Magazine
Home » Puntland Wararka
Puntland oo gacanta ku dhigtey Xubno katirsan Daacish.
Ciidamada amniga Puntland ee looyaqaan PSF ayaa Hawlgalo ka sameeyeen gudaha magaalada Bosaso ayaa waxay ku soo qabteen qaraxyo kala duwan oo ay kooxda Daacish ku diyaariyeen sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamka PSF ta Puntland.
Warka kasoo baxay ciidamada amniga ee PSF ta ayaa lagu sheegay in ciidamanka PSF tu gacanta ku dhigeen xubno katirsan Ururka Daacish.
“Hawlgalkan ay ciidamada PSF galabta fuliyeen ayaa daba-socday hawlgalkii sagaalkii bishan ay ciidanka PSF ka sameeyeen Bosaso oo lagu diley xubin muhiim ah ka tirsanaa Daacish sidoo kalena lagu soo qabtay madaxii Amniyaatka Daacish ee gobolka Bari iyo 2 gaari oo qaraxyo lagu soo xiray. “
“Qaraxyadan ay ciidamada PSF fashiliyeen ayaa koobnaa qaraxyada dhulka la geliyo iyo suumanka qaraxa ee ay naftood-haligyaashu isku qarxiyaan” ayaa lagu yiri warka ay soo sareen ciidamka PSF-ta.
Ciidamada ayaa sheegay inay sii wadi doonan howlagalada lagu xaqiijanayo amniga ka waday magaalada boaso ee xarunta gobolka bari shacabka ayayna ka codsadeen in ay ciidamadooda ku garab istaagaan ka hortaga weerarad argagaxisada.